चलचित्र क्षेत्र सोचे जस्तो रहेनछ– निष्मा घिमिरे, नायिका
चलचित्र ‘रिदम’बाट नेपाली रजतपटमा नायिका बनेर झुल्किएकी निष्मा घिमिरेले छोटो अवधिमै चारवटा चलचित्रमा काम गरिसकेकी छन् । रंगकर्मीहरू भन्छन्, क्षमता भएकाले निष्मालाई कामको खाँचो छैन ।’ नृत्यकलामा पोख्त उनी खाली समयमा डान्स सिकाउने काम पनि गर्छिन् । अहिले आफू भने साल्सा डान्सको प्रशिक्षण लिँदै छिन् । उनै नृत्यांगना नायिका निष्मासँग रेजिना पाण्डेले गरेको कुराकानी : हिजोआज चलचित्रमा कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ ? खासै चलचित्रमा कामका अफर… विस्तृत समाचार
जवानी फर्किए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ-गौरी मल्ल, नायिका
१८ जेठ २०७३
पन्ध वर्षको उमेरमै चलचित्र नगरीमा हामफालेकी गौरी मल्ल एक समयकी निर्विकल्प नायिका हुन् । उनका नाममा थुप्रै सुपरहिट चलचित्र बने र चले । नारीप्रधान चलचित्रमा बढी देखिने यी नायिकाको अभिनय कौशलले थुप्रैको मन जित्यो । सन्तान, कन्यादान, स्वर्ग, प्रेमपिण्ड जस्ता दर्जनौँ चलचित्रमा उनको अभिनय जीवन्त रह्यो । तिनै नायिका केही वर्षको अन्तरालपछि फेरि नेपाली दर्शकमाफ आएकी छन् । उनी अभिनित चलचित्र ‘होमवर्क’ आउँदो शुक्रबार देशभर… विस्तृत समाचार
जिस्क्याउने केटाहरुलाई हलो भनिदिन्छु -बन्दना श्रेष्ठ, मोडल
भर्खरै १७ वर्ष लागेकी बन्दना श्रेष्ठ अहिले र्‍याप मोडलिङ क्षेत्रमा व्यस्त छिन् । मोडलिङबाटै आफ्नो करिअर बनाउने योजनामा रहेकी बन्दना अहिले १२ को परीक्षामा पनि व्यस्त छिन् । गोल्डेनगेट कलेजमा अध्यनरत उनै बन्दनासँग रेजिना पाण्डेको जम्काभेट : मोडलिङ क्षेत्रलाई नै किन रोज्नुभयो ? टेलिभिजनमा राम्रो र टिपटप भएर थुप्रै युवतीहरु हिंडेको देख्दा आफूलाई पनि त्यस्तै हुन मन लाग्थ्यो । पत्रिकामा उनीहरुको फोटो छापिएको देख्दा आफ्नो… विस्तृत समाचार
मानोपाथी भरेर जीवन चल्दैन-आश्मी श्रेष्ठ, मिस नेपाल
१६ प्रतियोगीलाई उछिन्दै यो वर्षको मिस नेपाल बन्न सफल भइन्, आश्मी श्रेष्ठ । सानैदेखिको मिस नेपाल हुने सपना बुनेकी आश्मीले त्यसका लागि धेरै मेहनत गरेकी थिइन् । अन्तत: उनी सफल पनि भइन् । २१ औँ मिस नेपालको ताज पहिरिँदा संसारै जितेको अनुभव भएको बताउने आश्मीसँग रेजिना पाण्डेले गरेको कुराकानी । मिस नेपालको क्राउन जित्दा कस्तो महसुस भयो ? एउटा सपना पूरा भएकोमा धेरै खुसी लाग्यो… विस्तृत समाचार
श्रीमान घर चलाउनुहुन्छ, म जिल्ला चलाउँछु-इन्दु घिमिरे, सिडिओ, कपिलवस्तु
७५ जिल्लाका सिडिओमध्ये इन्दु घिमिरे एक मात्र महिला सिडिओ हुन् । स्याङजामा एक वर्ष सफलतापूर्वक काम गरेपछि गृहमन्त्रालयले उनलाई कपिलवस्तुको सिडिओको रुपमा जिम्मेवारी दिएको छ । नायव सुब्बाबाट २०५४ सालमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेकी उनी २०७१ मा सहसचिव भएकी हुन् । उनै घिमिरेसँगको यसपटकको जम्काभेट : सिडिओका रुपमा काम गर्दाको अनुभव कस्तो भइरहेको छ ? मैले आफूलाई कहिल्यै पनि आफू महिला भनेर अनुभव गर्दिन ।… विस्तृत समाचार
नायिकाकै रूपमा चिनिन चाहन्छु- आश्मा डीसी, नवनायिका
टेलिभिजनकी ‘भिजे’ हुँदै रजतपट यात्रामा निस्किएकी नायिका आश्मा डीसीको व्यस्तता हिजोआज बढ्न थालेका छ । पहिलो चलचित्र ‘आभास’बाट आफूलाई सम्भावना भएकी नायिकाका रूपमा स्थापित गरेकी आश्माको पछिल्लो चलचित्र ‘राम प्यारी’ २६ चैतदेखि चलचित्र विभिन्न हलहरुमा लागिरहेको छ । अहिले ‘राम प्यारी’को प्रोमोशनमा आफूलाई व्यस्त राखेकी यि नायिकासँग रेजिना पाण्डेले गरेको कुराकानी : के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ? चैत २६ गतेदेखि ‘रामप्यारी’ रिलिज भइरहेको छ ।… विस्तृत समाचार
आफ्नै ‘फिल्म मेकिङ’मा ब्यस्त छु-पूजा शर्मा, नायिका
‘मधुमास’ चलचित्रबाट सिने जगतमा उदाएकी पुजा शर्माले आधा दजर्न जति चलचित्रमा अभियन गरिसकेकछी छिन् । ‘अझै पनि’, ‘चंखे पंखे शंखे’ जस्ता चलचित्रमा यिनको अभिनयको सबैले तारिफ गरे । पछिल्लो चलचित्र ‘प्रेम गीत’को अभिनयले यिनलाई अझ माथि पुर्‍याएको छ । देशभरका विभिन्न हलमा यो चलचित्र तेस्रो हप्तामा अहिले पनि लागिरहेको छ । म्युजिक भिडियो, टेलिभिजनको भिजेका रुपमा समेत स्थापित यिनै पूजासँग रेजिना पाण्डेले गरेको कुराकानी :… विस्तृत समाचार
विवाहको कुरा हल्ला मात्र हो-शिल्पा पोखरेल, नायिका
छोटो समयमै चर्चाको शिखरमा पुगेकी नायिका हुन्, शिल्पा पोखरेल । यद्यपि उनले अभिनय गरेका चलचित्रको संख्या धेरै छैन । म्युजिक भिडियोमा राम्रै जमेपछि फिल्म सिटीमा पाइला चालेकाले उनले पहिचानको लागि त्यति संघर्ष गर्नुपरेन । अझ चर्चित निर्माता छवि ओझाको साथ मिलेपछि त शिल्पाले नसोचेको प्लेटफर्म पाइन् । पछिल्ला केही समयदेखि भने उनको व्यस्तता घटेको छ, तर चर्चा घटेको छैन । प्रस्तुत छ, उनै शिल्पासँग रेजिना… विस्तृत समाचार
प्रेम र विवाहका प्रस्ताव धेरै आउँछन्-अकेशा विष्ट, भिजे/नायिका
केही वर्षअघिसम्म अरुले टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाउँदा अचम्ममा पर्ने अकेशा विष्ट अहिलेकी चर्चित भिजे हुन् । कान्तिपुर टेलिभिजनको चर्चित कार्यक्रम ‘कल कान्तिपुर’मा पछिल्ला वर्षदेखि उनी जमिरहेकी छन् । तर, उनलाई यो क्षेत्रमा यसरी स्थापित भइएला भन्ने लागेको थिएन । स २०१२ मा भएको ‘मिस नेपाल’ प्रतियोगितामा भाग लिएपछि उनको भाग्य खुल्यो । मिस नेपालको ताज त उनले परिहिन पाइनन् । तर, कान्तिपुर टेलिभिजनका प्रोड्युसरको आँखामा परिन्… विस्तृत समाचार